7 - BookCubicle
Durotan တဟုန်ထိုး ထလိုက်သည်။ သူ့လက်အစုံက သူ အမြဲ ကိုယ်နှင့်မကွာဆောင်သော ဆူးချွန်များပါရှိသည့် တင်းပုတ်ကို တန်းရောက်သွား၏။ Orgrim ကမူ Blackrock ၏ ရိုးရာ လက်နက်ဖြစ်သော သတ္တုနှင့် သစ်သားရောထားသည့် တူကို ပိုနှစ်သက်သည်။ ထိုတူမှာ သူ တစ်နေ့ ဆက်ခံရမည်ဖြစ်သော ဒဏ္ဌါရီလာ တူနှင့် ပုံစံတူပြီး ပိုမို ရိုးရှင်းသောတူ ဖြစ်သည်။ ကောင်လေးနှစ်ယောက် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အကြည့်ချင်း ဖလှယ်လိုက်ကြ၏။ သူတို့ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ဆက်သွယ်ဖို့ စကားပြောဆိုရန် မလိုပါ။ မြေကြီးကို ဒီလေါက်တုန်ခါသွားစေသည့် အရာမှာ အမွေးအမျှင် ထူထဲလှသောကြောင့် ခြုံစောင်အများကြီး ထုတ်လို့ရပြီး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံး ဗိုက်ရိုက်စားလို့ရအောင်
ကြီးမားလွန်းသည့် clethoof အကြီးစား တစ်ကောင်များလား? ဒါမှမဟုတ်..... အဲ့ဒီ့ထက် ပိုပြီး အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုခုလား?
Terokkar တောအုပ်ထဲမှာ ဘာအကောင်များ ရှိမှာမို့လို့လဲ။ သူတို့နှစ်ယောက် ဒီတေါထဲလာသည်မှာ ဒီတစ်ခါသာ ရှိသေး.....
သူတို့ ပြိုင်တူပင် ထရပ်လိုက်ကြသည်။ သူတို့၏ မဲနက်သော မျက်လုံးများက တောအုပ် အစွန်ဘက်ရှိ နီးကပ်စွာပေါက်ရောက်နေသော သစ်ပင်များအကြားသို့ စူးစိုက်စွာ ကြည့်နေကာ ဆူညံသံကို ထုတ်လွှတ်လိုက်သည့် အရာကို ရှာဖွေနေကြသည်။
မြေကြီးမှာ ထပ်မံ တုန်ခါသွားပြန်သည်။ Durotan ရင်ဘတ်ထဲမှ နှလုံးခုန်သံများ ကျယ်လောင်လာသည်။ အကယ်၍ ထိုအရာသည် clefthoof အသေးတစ်ကောင်သာ ဖြစ်ခဲ့ပါက သူတို့နှစ်ယောက် တူတူ သတ်ဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက် အသားများကို ၂ဖွဲ့လုံး မျှစားနိုင်မည်။ သူ Orgrim ကို လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါ Orgrim မျက်လုံးများ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် တောက်ပနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး ပင့်သက်ရှိုက်လိုက်ပြီး ထိုအသံ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ နောက်သို့ ဆုတ်သွားကြသည်။ သူတို့နှင့် အနည်းငယ်သာကွာဝေးသည့်နေရာတွင် ရှိသော သစ်ပင်တစ်ပင်မှာ မျက်စိရှေ့တွင်ပင် အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ကွဲထွက်သွားလေသည်။ ဆူညံသံများ ထုတ်လွှတ်နေသော အရာမှာ ရှေးဟောင်းသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကို ဖျက်စီးပြီးနောက်တွင် သူတို့ မြင်ကွင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်လာလေသည်။
ထိုအရာမှာ ကြီးမားလွန်းလှသည်။ သူတို့တင်းပုတ်နှင့် အရွယ်တူ တင်းပုတ်တစ်ခုကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး clefthoof တစ်ကောင်မဟုတ်သည်မှာ အတော်လေးသေချာသည်။
ထို့အပြင် ထိုအရာက သူတို့ကို မြင်သွားပြီဖြစ်သည်။
၎င်းက သူ့ ပါးစပ်ကြီးကို ဖွင့်ပြီးနောက် တစ်ခုခုကို အော်ဟစ်လိုက်သည်။ အော်သံမှာ ဝိုးတိုးဝါးတားသာ ကြားရသဖြင့် နားမလည်နိုင်ချေ။ သို့သော် Durotan ကတော့ သူဘာပြောလိုက်သည်ကို အဖြေရှာရန် အချိန်ယူနေမည် မဟုတ်ပါချေ။
အတွေးများတူညီစွာပင် ကောင်လေးနှစ်ယောက်စလုံး နောက်လှည့်ကာ တစ်ပြိုင်တည်း ပြေးကြတော့သည်။
သူတို့ စောစောတုန်းက တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အပြေးပြိုင်ရန် စိန်ခေါ်ဖို့ မဆုံးဖြတ်ခဲ့မိကြလျှင် ကောင်းမည် ဟု Durotan အပြင်းအထန် ဆုတောင်းမိလေသည်။ သူ့ ခြေထောက်များမှာ အားပြန်မပြည့်သေးပေ။ သို့သော် သူက ပြေးရန် ခိုင်းသောအခါ ​ခြေထောက်များ ပြေးတော့ပြေးကြပါလေသည်။ သေရေးရှင်ရေး ဖြစ်နေချိန်တွင် အသက်ရှင်လိုစိတ်က အားများပေးလိုက်သလိုပင်။
ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဘီလူးတို့၏ ပိုင်နက် နယ်မြေထဲထိ သူတို့ နယ်ကျွံမိသွားကြတာလဲ? Groon ကရော ဘယ်ရောက်နေတာလဲ? ဘီလူးက သစ်ပင်များကြား အားနှင့်မာန်နှင့်လိုက်နေသလို ထိုဘီလူး၏ သခင်များထဲမှ တစ်ယောက်လည်း လိုက်နေပုံကို Durotan တွေးကြည့်မိသည်။ ဘီလူးများထက်ပင် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့် Orcs များပေါ်တွင် ဘီလူးများ ထပ်နေသကဲ့သို့ ဘီလူးများပေါ်တွင် ဘီလူးတို့ ထပ်ဆင့်နေသည်။ ကမ္ဘာမြေကြီး ထပ်မံ တုန်ခါသွားသည်။ ထိုဘီလူး သခင်၏ မျက်လုံးတစ်လုံးမှာ နီရဲနေကာ Durotan နှင့် Orgrim တို့ကို စိုက်ကြည့်ပြီး လက်ညှိုးထိုးပြကာ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ဘီလူးထံ ညွှန်ပြလိုက်လေသည်။
သူနှင့် Orgrim တို့သည် လူကြီးဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး အဖွဲ့၏ သူရဲကောင်းများနှင့် အတူပူးပေါင်းကာ ဘီလူးများနှင့် တစ်ခါတစ်ရံ ရှားရှားပါးပါး Groon များကို အမဲလိုက်ဖို့ စတင်ခွင့်ပြုချက်ရသည့် အရွယ်မရောက်သေးပါချေ။ သူတို့အဖွဲ့များ သွားသည့် အန္တရာယ်နည်းပါးသော talbuk နှင့် အခြားအကောင်ငယ်လေးများကို အမဲလိုက်သည့် ခရီးစဥ်များတွင်မူ လိုက်ပါဖူးပါသည်။ သို့သော် ထို ကြောက်မက်ဖွယ် သတ္တဝါများကို အမဲလိုက်အနိုင်ယူကာ သူရော သူ့အဖွဲ့ကိုပါ ဂုဏ်တက်စေရန် လုပ်ဖို့ အခွင့်ရမည့်နေ့ကို Durotan တောင့်တမျှော်လင့်ခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်။
ယခုမူ သူ သိပ်မသေချာတော့ပါချေ။ မြေကြီးမှာ ဆက်လက် တုန်ခါချက်ရှိပြီး ဘီလူး၏ အော်ဟစ်သံများက တဖြည်းဖြည်း ပိုမိုကျယ်လောင် ပီသလာလေပြီ။
" Orc ကောင်လေးတွေကို သတ်ပစ်စမ်း! ခြေမွပစ်!"
ထိုအသံများနောက်တွင် ပါလာသည့် အော်သံကြီး​မှာ သူ့နားကို သံရည်ပူလောင်းချလိုက်သကဲ့သို့ပင်။
သူ့ဦးနှောက်မှ မြန်သထက်မြန်အောင် ပြေးဖို့ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာဖြင့် အမိန့်များဆက်တိုက်ပေးနေပေသည်။ သို့သော် သူနှင့် ကြောက်ရွံ့စက်ဆုပ်ဖွယ် သတ္တဝါကြီးအကြားရှိ အကွာအဝေးမှာ နီးကပ်လွန်းသောကြောင့် သစ်ပင်များအကြားမှ လာသည့် အလင်းရောင် အနည်းငယ်သည်ပင် ထိုသတ္တဝါ၏ အရိပ်ကြောင့် ပျောက်ကွယ်လုနီးပါး ဖြစ်နေရာ သူ ဆက်ပြေးရန် မတတ်နိုင်တော့ချေ။
တဖြည်းဖြည်းနှင့် သစ်ပင်များ နည်းပါးလာပြီး အလင်းရောင်က ပိုမိုတောက်ပလာသည်။ သူတို့ တောအုပ်၏ အစွန်းသို့ နီးကပ်လာချေပြီ။ Durotan ဆက်လက်ပြေးနေပြီး မြက်ခင်းပြင်ပေါ်သို့ ဝုန်းခနဲ ချော်ကျသွားသည်။ သူ့ခြေထောက်များက နူးညံ့သည့် မြက်တို့၏ အထိအတွေ့ကိုခံစားလိုက်ရသည်။ Orgrim က သူ့ရှေ့တွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သိပ်ဝေးဝေးတော့ မဟုတ်ပါ။ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခြင်းတို့က သူ့တစ်ကိုယ်လုံး ပျံ့နှံ့လာသည်။ သူ့နောက်တွင်လည်း အမွှေးနက် သတ္တဝါကြီးက ဒေါသကြီးစွာဖြင့် အသည်းအသန်လိုက်နေသည်။
သူတို့သည် လူကြီးများပင် မဖြစ်သေး! ပထမဆုံး အမှန်တကယ် အမဲလိုက်ခြင်းခရီးစဥ်ကိုပင် မသွားရသေး! မီးပုံဘေးတွင် မိန်းကလေးများနှင့် မကခုန်ရသေး! သူတို့ ကိုယ်တိုင် ပထဆုံးသတ်ဖြတ်ထားသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တို့၏ ပွက်ပွက်ဆူနေသော သွေးများထဲတွင် တစ်မျက်နှာလုံး ရွှဲရွှဲစိုအောင် မချိုးရသေး!! သူတို့မလုပ်ရသေးသည့် ကိစ္စတွေ အများကြီးရှိသေးသည်!!! စစ်တိုက်ရင်းနှင့် သူရဲကောင်းဆန်ဆန် မြင့်မြတ်စွာ အသက်ပေးရခြင်းက ဂုဏ်ရှိသည်။ သို့သော် သူတို့သည် ကြောက်မက်ဖွယ်သတ္တဝါကြီး​ထံမှ မွှန်ထူနေအောင်ပြေးလွှားနေကြရသောကြောင့် ယခု သေသွားမည်ဆိုလျှင် ဂုဏ်ရှိမည်ကို အသာထား၊ လူရယ်ချင်စရာကြီး ဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။
ယခု သူ့အတွက် စက္ကန့်တိုင်းသည် အသက်တမျှ တန်ဖိုးရှိနေမှန်း သိသော်ငြား Durotan က မနေနိုင်မထိုင်နိုင်စွာ စိတ်ပေါက်ပေါက်ဖြင့် ခေါင်းကိုလှည့်ကာ သူ့အား တင်းပုတ်ဖြင့် စိစိညက်ညက် ကြေအောင် ထုသတ်မည့် ဘီလူးကြီးအား အော်ဟစ်ကျိန်ဆဲရန် လှည့်ကြည့်ပစ်လိုက်သည်။
သူမြင်လိုက်ရသည့် မြင်ကွင်းကြောင့် Durotan ပါးစပ် အဟောင်းသား ဖြစ်သွားလေသည်။
Hsu Yamin Myat 10.11.2019, 17:33 5
Kg pr DL shin